China 1.6mm haingana prototype standard FR4 PCB mpanamboatra sy mpamatsy | Kangna
Karazana fitaovana: FR-4
Min kely habe: 0.40mm
Vina matevina vita: 1.2mm
Vita: mitarika HASL maimaim-poana
Loko saron-tava solder: maintso
Fotoana fitarihana: 8 andro
Ny takelaka vita pirinty vita pirinty dia singa elektronika iray manan-danja, ny vatan'ny singa elektronika mpanohana, no mitondra ny fifandraisana elektrika amin'ireo singa elektronika. Satria vita amin'ny fanontana elektronika izy io, dia nantsoina hoe tabilao "vita pirinty" izy io.
Saika ny fitaovana elektronika rehetra, manomboka amin'ny famantaranandro sy calculatera elektronika ka hatramin'ny solosaina, fitaovana elektronika fifandraisana ary rafitra fitaovam-piadiana miaramila, dia mampiasa tabilao vita pirinty mba hampifandraisana ny herinaratra eo anelanelan'ny singa raha toa ka misy singa elektronika toy ny boriborintany mitambatra. Ny takelaka vita pirinty vita pirinty dia misy takelaka fototra miorina, mampifandray tariby ary takelaka fanosotra hanangonana singa elektronika mifangaro. Izy io dia manana ny asan'ny roa amin'ny fitarihana tsipika sy ny takelaka ifotony. Izy io dia afaka manolo ny tariby sarotra, mahatsapa ny fifandraisana elektrika eo amin'ny singa tsirairay ao amin'ny faritra, tsy manamora ny fivorian'ny vokatra elektronika, ny asa welding, mampihena ny fomba nentim-paharazana amin'ny fametahana tariby, mampihena be ny hamafin'ny mpiasa; Mampihena ny volan'ny milina iray manontolo koa izy io, mampihena ny vidin'ny vokatra ary manatsara ny kalitao sy ny fahamendrehan'ny fitaovana elektronika. Ny tabilao misy tariby vita pirinty dia manana tsy fitovizan'ny vokatra tsara ary azo atao manara-penitra mba hanamorana ny mekanisation sy automation amin'ny fizotry ny famokarana. Mandritra izany fotoana izany, ny tabilao vita pirinty vita pirinty iray aorian'ny fivorian'ny debugging dia azo ampiasaina ho faritra tsy miankina mahaleo tena hanamorana ny fifanakalozana sy ny fikojakojana ny vokatra milina iray manontolo. Amin'izao fotoana izao, ny birao fanaovana pirinty vita pirinty dia be mpampiasa amin'ny famokarana vokatra elektronika
Araka ny isan'ny sosona boribory dia sokajina ho tontonana tokana, tontonana roa ary tontonana multilayer. Ny lamina mahazatra dia matetika 4 na 6 sosona, ary ny sosona sarotra dia mety hahatratra sosona am-polony.
Manaraka: 8.0W / mk fitarihana hafanana ambony MCPCB ho an'ny fanilo elektrika
fihodinana haingana prototype volamena plating PCB miaraka amin'ny Coun ...
8.0W / mk fitaterana hafanana ambony MCPCB ho an'ny El ...